မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း (MRCS) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) တို့သည် ဆမီးနှင့် ပလက်ဝတို့တွင် လာရောက်ခိုလှုံနေကြသည့် ထိုမိသားစုများထံသို့ သွားရောက်ကူညီရန် ပူးတွဲလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါသည် - Myanmar Red Cross Society (MRCS)
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း (MRCS) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) တို့သည် ဆမီးနှင့် ပလက်ဝတို့တွင် လာရောက်ခိုလှုံနေကြသည့် ထိုမိသားစုများထံသို့ သွားရောက်ကူညီရန် ပူးတွဲလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါသည်
ချင်းပြည်နယ်တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသည့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောမိသားစုများသည် မိမိတို့နေအိမ်ကို စွန့်ခွာနေထိုင်ခဲ့ရသည်မှာ ၁၃လ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သကဲ့သို့ မိုးရာသီလည်းကျရောက်တော့မည် ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ ဘေးဖြစ်နိုင်ခြေများ အလွန်မြင့်မားလျက်ရှိနေသည့်အပြင် အကူအညီအထောက်အပံ့များလည်း အလွန်အမင်း လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း (MRCS) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) တို့သည် ဆမီးနှင့် ပလက်ဝတို့တွင် လာရောက်ခိုလှုံနေကြသည့် ထိုမိသားစုများထံသို့ သွားရောက်ကူညီရန် ပူးတွဲလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
မိမိတို့ ၂ဖွဲ့အတူတကွပူးပေါင်းကာ အိမ်ထောင်စု ၂၀၀၀ နီးပါးအတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး နေထိုင်ရန်အမိုးအကာ(ယာယီတဲ) ၁၈၀၀ လုံးအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် နှင့် ပြန်လည်ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ ဆမီးရှိ နေရပ်စွန့်ခွာလာသော ရပ်ရွာလူထုအတွက် ရေရရှိမှု သေချာစေရန် ရေစုပ်စက်နှင့် လောင်စာဆီကိုလည်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ မိုင်းဧရိယာတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်များကို ရပ်ရွာလူထုအား သတိပေးရန် မြေစိုက်ပိုစတာကြီးများ စိုက်ထူပေးခြင်းနှင့်အတူ လူပေါင်း ၇၀၀ အတွက် မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဘေးအန္တရာယ်များဆိုင်ရာ အသိပညာဟောပြောပွဲများလည်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) တို့သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှစတင်ကာ ချင်းပြည်နယ်ရှိ နေရပ်စွန့်ခွာမိသားစုများအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများကို ပံ့ပိုးလျက်ရှိပါသည်။
“နေရပ်စွာခွာနေထိုင်ရတာ တစ်နှစ်ကျော်လာပြီဆိုတော့ ဒီစခန်း၁၁ ခုမှာရှိတဲ့ တဲတွေတော်တော်များများလည်း ပျက်စီးနေကြပြီ၊ မိုးဒဏ်လည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။” ဟု မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၏ ချင်းပြည်နယ်အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတာဝန်ခံ ဒေါ်အေးအေးငြိမ်းက ပြောပါသည်။
“ပဋိပက္ခဒဏ်ခံနေရတဲ့ မိသားစုတွေ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားသွားနိုင်ဖို့ သူတို့ကို ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ဆက်လက်ကူညီပေးသွားဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်” ဟု ICRC အဖွဲ့၏ ချင်းပြည်နယ်အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတာဝန်ခံ Olivier Dorighel က ပြောပါသည်။
After 13 months of displacement and with the rainy season around the corner, thousands of families who fled their homes in southern Chin State remain extremely vulnerable and in dire need of assistance. The Myanmar Red Cross Society (MRCS) and the International Committee of the Red Cross (ICRC) set upajoint operation to reach those families seeking shelter in Samee and Paletwa. Together, we provided cash assistance to nearly 2000 households and materials to renovate and rebuild 1800 shelters. We also donated engine pumps and fuel in Samee to secure access to water for displaced communities. Mine risk awareness sessions were conducted for more than 700 people, with billboards being installed to warn communities of the danger posed by mined areas.
The MRCS together with ICRC have been providing humanitarian assistance to displaced families in Chin State since last year.
“After more than one year of displacement, most of the shelters across the 11 camps were extremely deteriorated and unable to withstandamonsoon,” said Aye Aye Nyein, MRCS Chin Operation.
“Along with the MRCS, we will continue to help families affected by conflict, without discrimination – seeking to help them cope with the challenges they are facing,” stated Olivier Dorighel, ICRC Operations Manager for Chin.